Chii chinonzi Yakasarudzika Kukosha Chirevo?
Nzira Yekukudziridza Yakakura Kukosha Chirevo
Mugovera, June 9, 2018 Muvhuro, Zvita 17, 2018 Douglas Karr
Imwe yehondo dzese dzandinorwira nemakambani kumira kufunga nezvazvo zvavanoita uye tanga kufunga nezvazvo nei vanhu vachishandisa chigadzirwa kana sevhisi. Ini ndinokupa iwe inokurumidza muenzaniso… zuva nezuva, iwe uchandiwana ini ndichirekodha nekugadzirisa podcast, kunyora yekubatanidza kodhi, kushandisa yechitatu-bato mhinduro, uye kudzidzisa vatengi vangu. Blah, blah, blah… ndosaka vanhu vachibata masevhisi angu. Ivo vanogona kuwana chero eaya masevhisi kuenderera Fiverr kwemazana zana rebasa. Vatengi vangu vanondiroja nekuti ini ndinokwanisa kushandura yavo yekushambadzira edhijitari uye nekukura mhedzisiro yavo zvakanyanya kune yakaderera mari
Pane fananidzo yandinowanzo shandisa. Ndine mota yandinounza yekugadzirisa mwedzi wega wega kana zvakadaro. Iko kuchengetedza mota yangu muchimiro chakanaka uye kundichengeta ndichidzokera nekudzoka kubasa. Ini handisi makanika. Zvino, kana ini ndaishuvira kuti mota yangu igadziriswe uye kukwidziridzwa kuti ndikunde mijaho, ndaizoiunza kuna iye makanika here? Kwete. Yangu agency haisi shopu yekuchinja mafuta, ndiyo kuhwina mujaho shop.
Zvinonzwika zviri nyore, handiti? Kwete… nekuti makambani anofunga kuti arikutenga shanduko yemafuta asi ivo chavanotoda ndechekuhwina mujaho.
Chii chinonzi kukosha kukosha?
Iyo inozivikanwa zvakare seYakasiyana Kukosha Zvirongwa (UVP), yako kukosha chirevo chirevo chipfupi chaisanganisira mabhenefiti emasevhisi awakapa pamwe nekuti unozvipatsanura iwe kubva kune vako vanokwikwidza.
Pro Tip: Usati waenderera kumberi neiko iwe unofunga ndiyo yako yakasarudzika Kukosha Chirevo… bvunza vako varipo vatengi kana vatengi! Unogona kushamisika kuti hazvisi izvo zvaunotenda chaizvo kuti ndizvo.
Your kukosha kwesarudzo inofanirwa kuzadzisa zvinhu zvina:
Inofanira bata pfungwa yemuenzi. Kambani yako haisi kuwana mhedzisiro yainotarisira kubva kune yako yekushambadzira mari - ndosaka vanhu vachindiroja.
Zvinofanira kudaro nyore kunzwisisa. Ini ndinogovana kuti hukama hwebhizinesi neni hunodhura zvakaderera pane mutengo weiye wenguva yakazara mushandi uku uchipa makumi emakore ehunyanzvi.
Inofanira kusiyanisa iwe kubva kumakwikwi ako online. Kana yako runyorwa rwekukosha zvirevo zvakafanana nevakwikwidzi vako, tarisa pane iyo yavasina kutarisisa. Mumuenzaniso wangu, isu hatisi agency yakanangana necheni imwe chete, hunyanzvi hwangu hunogadzira huwandu hwetekinoroji nemazano kuitira kuti ndikwanise kuraira vatungamiriri vebhizimusi maitiro ekuvandudza bhizinesi ravo vachitaurirana nezvavanowana pamaitirwo acho.
Inofanirwa kuve inokwezva zvakakwana kuti inyatso fambisa sarudzo yemutengi. Muenzaniso: Tinopa zuva makumi matatu kunze kwevatsigiri vedu sezvo tichitenda mukukosha kwedu uye tichida kuve nechokwadi chedu mutengi kubudirira.
Muindasitiri yeecommerce, kune akati wandei zvakajairika kukosha kukosha zvirevo… kumhanya kwe kuendesa, mutengo wekutakura, kudzoka marongero, yakaderera mutengo vimbiso, transaction chengetedzo, mune-stock mamiriro. Zvese izvo zvinoshandiswa kuwedzera kuvimba uye kuita kuti mushanyi atengese vasina kusiya nzvimbo uye kuenzanisa kunotenga kumwe kunhu. Kune chako chigadzirwa kana sevhisi, unofanirwa kuve unogadzira… ndezvako zviwanikwa? Nzvimbo? Chiitiko? Vatengi? Unhu? Mutengo?
Mushure mekusarudza yakasarudzika kukosha chirevo, iwe unofanirwa kuikurukura mukati uye zvinowirirana kuiisa mune yega yega yekutengesa uye yekushambadzira meseji yauri kutumira.
Mumwe muenzaniso wakanaka ndeye Lifeline Data Centres, a Midwest colocation chivako uye mutengi wedu. Ivo vane yakawanda nzvimbo yekuyera kupfuura chero mumwe mukwikwidzi muMidwest. Ivo vanopupurirwa kune federal yepamusoro zvakavanzika data. Uye… parizvino vari kuvaka hofisi nzvimbo muzvivakwa zvavo. Iko kusanganisa kwakasarudzika zvekuti tiri kushanda navo pa saiti uye brand redesign izvo zvichazadza zvizere mutsauko!
UVP yako inogona kusatungamira mukumiswazve… asi zvinofanirwa kuve pachena kubva pawebhusaiti, pasocial, nekutsvaga kwekutsvaga izvo kukosha kwako chirevo! Heano akakura infographic kubva ku QuickSprout, Maitiro Ekunyora Kwakakura Kukosha Chirevo.
Tags: sei kutikuti unyore seiinfographicquicksproutihwohwo hunokosha kukoshakukosha kwesarudzo
Droplr ndiyo Yakanyanya Kugovana Faira Turu Inowanikwa?
Yemagariro Suite: Yemagariro Media Management yeMakuru, Akawanda-Nzvimbo Mahofisi
Mar 20, 2015 pa 5: 06 PM
Iyi inyaya yakakosha. Ndinofunga vanhu vazhinji vanofunga kuti vanonzwisisa UVP, asi vari kuvhiringidza nechirevo chemishoni. Basa rakanaka, Douglas.
Mar 20, 2015 pa 9: 06 PM